China A3 UV Printer, UV Printer Mpitrandraka, Printer Sakafo, Mpanjifa Printer Mpanjifa
Description:A3 UV Printer mpamokatra / mpanolotra, manolotra UV Flatbed Printer,Printer Food, sns.
Printer Food >
6090 UV Printer miaraka amin'ny Double XP600 Printer Head Contact Now
UV Flatbed Printer dia afaka manonta ny fitaovana rehetra Contact Now
RefIne Colour TECH Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2015, Fikarohana sy fampandrosoana, famokarana, varotra ary serivisy ho an'ny orinasa tahaka ny iray amin'ireo orinasa. Ny vokatra Main: fampiasa format medium sy kely format flatbed, avo lenta LED UV flatbed printer, mpanonta fonosana sy loko hafa maimaim-poana. Ny fitaovana dia azo ampiasaina amin'ny T-shirts, shell telephones, sakafo, hazo, vato, hoditra, lamba, metaly, glas, kristaly, acrylic, PVC, ABS, TPU ary ny hafa printy loko fanontam-pirinty, mandroso. Ny orinasa R & D sy ny famokarana fanontam-pirinty universal, ny printer misy flatbed dia mametraka programa dizitaly, ny scanner amin'ny infrarozy, ny fanamafisam-peo maromaro ary ny mari-pamantarana avo lenta, mba hahazoana antoka fa ny fampisehoana printy dia miorina tsara kokoa sy mendrika kokoa!
Tohizo ny vokatra eto ambany:
1. RF-A3UV / RF-A4UV dia karazana "fitaovam-pifaneraserana" amin'ny karazana "tsy mifandray", ny fampiharana azy dia tena goavana. Amin'ny fampiasana ireo fitaovana manohana ny ranon'ny UV, ankoatra ny tavy tsy afaka manonta, ny ankamaroan'ny fitaovana hafa (ny finday, ny hoditra, ny marika, ny boaty maivana, ny famatsiana herinaratra, ny flash memy, ny KT boaty, ny vato, ny kilaometatra, hazo, ceramika, kristaly, acrylic, PVC, ABS sns). Azo atao ny miloko fanontam-pirinty, vita amin'ny fanamafisana ny ratra, ny fanoherana, ny fanoherana. Mba hahazoana fahatsapan-tena marina momba ny tombo-kase, tsy misy takelaka, mamafy mafana, sary feno loko.
2. Fitaovana tsotra amin'ny kafe / mofomamy miaraka amin'ny loko masaka no novolavolaina ho toy ny mpanonta trano manana lohan'ny doka ara-toekarena, izy io dia natao ho an'ny mpanjifa fidirana sy ny fivarotana kafe. Asa sarotra, haingam-pandeha haingana ary
Ny vidiny ambany dia hahasarika mpividy bebe kokoa ho avy. Hahasoa anao kokoa ny famoronana.
3. Ny printer RF-A3 dia afaka manonta T-shirt mainty, mena, fotsy, ary loko, ary fitaovana hafa, fanontam-pirinty tsy misy lamba ary takela-peo. Afaka manatanteraka sary fotsy fotsy, haingam-pandrefesana avy hatrany izy io. Tsy misy loko marevaka sy manelingelina. Izy io dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena manerantany ary mampiasa tavoahangy maitso amin'ny tontolo iainana izay afaka manatratra tanteraka ny fenitry ny fanaraha-maso avoakan'ny Eoropeana
Tetikasan'ny Printing T-shirt A3 Contact Now
refinecolor laptop sy tabilao fanontam-pirinty Contact Now
Fitaovana elektronika fanontam-pirinty fanontam-pirinty Contact Now
kafe mpamokatra kafe Contact Now
Printer Flatbed Digital for Sale Contact Now
Printer Power Bank Online Contact Now
6 Color Inkjet Printer Bag Contact Now
A3 Tolotra Digital T-shirt Contact Now
UV Flatbed Printer T-shirt Printer Printer Food Coffee Printer Cake Printer A3 UV Printer UV Flatbed Printer UK Efi UV Flatbed Printer
Copyright © 2020 Shenzhen Refinecolor Technology Co., LTD. Zo rehetra voatokana. Ampandehanin'i
A3 UV Printer mpamokatra / mpanolotra
, manolotra UV Flatbed Printer,Printer Food, sns.